WholesaleCOVID-19 SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ထုတ်လုပ်သူများ Immuno
အသုံးပြုသည် COVID 19 Antigen ကိုစစ်ဆေးခြင်း
နမူနာ နှာရည်သို့မဟုတ်တံတွေး swab
လက်မှတ် CE / ISO13485 / White List / DE တွင်မှတ်ပုံတင်ပါ
MOQ 10000 စမ်းသပ်ပစ္စည်းများ
ထုပ်ပိုး 20 စမ်းသပ်ရန်ပစ္စည်းများ / ထုပ်ပိုးခြင်း box50 သေတ္တာများ / ပုံးနံသေတ္တာအရွယ်အစား - 64 * 44 * 39cm
ဒေတာစစ်ဆေးပါ 95% ကျော် sensitivity နှင့်အထူးသ
ငွေပေးချေမှု T / T, Western Union, Paypal
IMMUNUBIO SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test သည် SARS-CoV-2 antigen များကိုစစ်ဆေးရန်ဖြစ်သည်။ Anti-SARS-CoV-2 monoclonal ပantibိပစ္စည်းများကိုစမ်းသပ်မှုလိုင်းတွင် coated နှင့် colloidal gold နှင့် conjugation ဖြစ်သည်။ စမ်းသပ်နေစဉ်အတွင်းနမူနာစမ်းသပ်မှုချောင်းတွင် SARS-CoV-2 ပantibိပစ္စည်းများနှင့်အတူဓာတ်ပြုသည်။ ထို့နောက်အရောအနှောသည်ဆံချည်မျှင်သွေးကြောဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုအားဖြင့်အမြှေးပါးအလွှာအပေါ်သို့ရွေ့လျားသွားပြီးစမ်းသပ်နယ်မြေရှိနောက်ထပ် Anti-SARS-CoV-2 monoclonal ပodိပစ္စည်းများနှင့်ဓာတ်ပြုနိုင်သည်။ အဆိုပါရှုပ်ထွေးသောစမ်းသပ်လိုင်းဒေသအတွင်းရောင်စုံလိုင်းကိုဖမ်းယူခြင်းနှင့်ဖွဲ့စည်းသည်။ SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test သည် SARS-CoV-2 monoclonal antibody ကို conjugated အမှုန်များနှင့်အခြား anti-SARS-CoV-2 monoclonal antibody များသည်စမ်းသပ်မှုလိုင်းများတွင်ပါဝင်သည်။
A.Fast Test, ရလဒ် 10-15 မိနစ်အတွင်း။
B. မြင့်မားသော sensitivity နှင့်တိကျသော
C. လည်ပတ်ရန်လွယ်ကူသော၊ လိုအပ်သောကိရိယာများမလိုအပ်ဘဲအဆင်ပြေလွယ်ကူစေရန်
E. အနည်းငယ်နမူနာ၊ နှာစေးသို့မဟုတ်လည်ချောင်းနမူနာအနည်းငယ်လိုအပ်သည်
၂ ဂျာမန်ကျန်းမာရေး ၀ န်ကြီးဌာနက
၃။ တရုတ်နိုင်ငံ၏ဖြူစင်သောစာရင်းက COV 19 စမ်းသပ်ကိရိယာများကိုထုတ်လုပ်သည်
စမ်းသပ်ခြင်း Pဟာသ တံတွေး Swab သည်
1. အိတ်မဖွင့်မီအခန်းအပူချိန်သို့ယူလာပါ။ စမ်းသပ်ကိရိယာကိုတံဆိပ်ခတ်ထားသောအိတ်ထဲမှဖယ်ထုတ်ပြီးဖြစ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးအသုံးပြုပါ။
၂။ စမ်းသပ်ကိရိယာကိုသန့်ရှင်းပြီးအလျားလိုက်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်တင်ပါ။ အဆိုပါနမူနာစုဆောင်းခြင်းပြွန်ကိုပြန်ပြောင်းပါ၊ ပြင်ဆင်ထားသောနမူနာ၏3ပေါက်ကိုနမူနာရေတွင်း (S) ၏နမူနာတွင်းထဲသို့ထုတ်ယူပြီး timer ကိုစတင်ပါ။ အောက်ဖော်ပြပါပုံကိုကြည့်ပါ။
ရောင်စုံလိုင်းပေါ်လာရန်စောင့်ပါ။ ရလဒ်များကို ၁၀ မိနစ်တွင်ဖတ်ပါ။ ၁၅ မိနစ်အကြာတွင်ရလဒ်ကိုအဓိပ္ပါယ်မကောက်ပါနှင့်
အမှာစာအားလုံးကိုငွေပေးချေပြီးနောက် ၁ ပတ်အကြာတွင်ပေးပို့ပါမည်။ Airexpress နှင့် forwarder များစွာတို့နှင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ၀ န်ဆောင်မှုအတွက်ကုန်ကျစရိတ်သည်ပိုကောင်းသည်။
1. စက်ရုံစျေးနှုန်း, ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ခြင်းနှင့်ယှဉ်ပြိုင်မှု
၂။ OEM / ODM ၀ န်ဆောင်မှု၊ ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့်အမှတ်တံဆိပ်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ခြင်းသာမကကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်ပိုင်ဓာတ်ခွဲခန်းနှင့် R&D အဖွဲ့ရှိသည်။
၃။ ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုအတွက်အချိန်မရွေး၊ အချိန်မရွေးပြန်လည်တုံ့ပြန်ပါ။
မေးခွန်း 1: သုတ်အမိန့်မကစားခင်နမူနာများကိုရနိုင်ပါသလား။
A: Qulaified နမူနာရရှိနိုင်ပါသည်အသေးစိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ရောင်းအားနှင့်ဆက်သွယ်ပါ။
A: MOQ သည်“0than ထက်ပိုသည်။ သို့သော်သင်လိုအပ်သောကုန်ပစ္စည်းများ၊ အမျိုးသားစျေးကွက်အခြေအနေ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစရိတ်နှင့်အခြားအချက်များအပေါ် မူတည်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏အရောင်းအဖွဲ့ကမည်မျှမှာယူရမည်ကိုအကြံပေးလိမ့်မည်။
မေးခွန်း ၃: အရည်အသွေးကောဘယ်လိုလဲ။
ဖြေ။ ။ စီအီးရထားပြီ။ တရုတ်အစိုးရရဲ့လူဖြူစာရင်းထဲမှာပါ။ ဂျာမနီကျန်းမာရေး ၀ န်ကြီးဌာနရဲ့စစ်ဆေးမှုရလဒ်ကိုရှာတွေ့နိုင်တယ်။
မေးခွန်း ၄: မင်းရဲ့စက်ရုံဘယ်မှာလဲ။ မင်းရဲ့စက်ရုံကိုသွားလည်လို့ရမလား
A: အလီဘာဘာသည် Hangzhou တွင်တည်ရှိပြီးမြန်နှုန်းမြင့်ရထားဖြင့်ရှန်ဟိုင်းမှနာရီဝက်အကြာတွင်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ထံလာရောက်လည်ပတ်သည့်အချိန်မရွေးသင့်ကိုကြိုဆိုပါသည်။
မေးခွန်း ၅: သင်စက်ရုံနှင့်ကုန်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီလုပ်ပါသလား
A: ကျွန်ုပ်တို့သည်စက်ရုံဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ထောက်ပံ့သောထုတ်ကုန်အားလုံးသည်သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးဖြစ်သည်။
မေးခွန်း ၆: ငါဘယ်လိုငွေပေးရမလဲ။
A: USD, Euro & RMB ကို T / T, PayPal သို့မဟုတ် Western Union မှတစ်ဆင့်ပေးနိုင်ပါသည်။
မေးခွန်း ၇: မင်းလက်မှတ်ကဘာလဲ
ရှေ့သို့ 2019-ncov လျင်မြန်စွာကိုပဲစမ်းသပ်ချွတ်
နောက်တစ်ခု: COVID-19 Antigen စမ်းသပ်ကိရိယာ
Rapid 2019-ncov coronavirus Antigen စမ်းသပ်မှု